Tartanka Booska 3aad Ee Serie A Oo Meel Halis Maraya Iyo Maanta Oo Lagu Kala Bixi Doono. - jornalizem
Tartanka Booska 3aad Ee Serie A Oo Meel Halis Maraya Iyo Maanta Oo Lagu Kala Bixi Doono.
* Juventus ayaa maanta si rasmi ah ugu dabaaldegi doonta horyaalkeedii 28aad ee Serie A marka ay la ciyaaraan kooxda Atlanta iyagoo rajeynaya inay xilli ciyaareedka ku dhameystaan iyagoo aan dhinacooda dhulka la dhigin marnaba, inkastoo kooxda iyo taageerayaal badan ay dhahayaan in horyaalkaan uu u yahay koodii 30aad oo ay ku guuleystaan.
Juve, oo todobaadkii hore xaqiijisatay horyaalka Serie A ayaa laga xayuubiyay horyaaladii ay qaadeen 2005 iyo 2006 ka dib fadeexadii Calciopoli.
“Waxaan sida xaqiiqda ah garoonka dhexdiisa ku qaadnay 30 horyaal oo Serie A” ayuu yiri madaxweynaha kooxda Andrea Agnelli ka dib markii kooxdiisa ay calaamad weyn oo nambar 30 ah ay ku dhajiyeen xaruntooda iyo garoonka Juventus Arena.
Juventus ayaa hadii ay maanta ka fogaato guuldarro waxa ay noqon doontaa kooxdii ugu horeysay ee horyaal ka kooban 38 kulan oo Serie A ku qaada iyadoo dhinaceeda aan dhulka la dhigin.
* Lakiin kulamada maanta isha lagu hayo waa tartanka loogu jiro kaalinta seddexaad ee Champions League loogu soo baxayo, iyadoo Udinese, Lazio, Napoli iyo Inter ay dhamaantood u tartamayaan.
Udinese ayaa haatan ku jirta kaalinta 3aad iyagoo leh 61 dhibcood, waxaa raacda Lazio oo leh 59 dhibcood, Napoli iyo Inter Milan waxa ay leeyihiin 58 dhibcood. Udinese waxa ay u baahan tahay hal dhibic oo ay ka hesho Catania si ay u xaqiijistaan booskooda kaalinta 3aad sababtoo ah waxa ay kulamada waji ka wajiga ah ka fiican yihiin Lazio.
Lazio ayaa Olimpico waxa ay ku soo dhaweyn doontaa kooxda Inter waxaana ay u baahnaan doonaan inay ka badiyaan Nerazzurri islamarkaana Udinese ay guuldarro soo gaarto si ay iyaga booska seddexaad ugu dhameystaan horyaalka.
Napoli waa inay garaacdaa kooxda Siena islamarkaana ay rajeysaa in Udinese laga badiyo islamarkaana Lazio ay ku guuldareysato inay badiso taasoo markaasi keeni doonta inay isku dhibco noqdaan udinese lakiin waxa ay kaga fiican yihiin rikoorka kulamada fool ka foolka ee xilli ciyaareedkan.
Inter kaliya waxa ay kaalin seddexaad ku soo geli kartaa hadii ay garacaan Lazio, Udinese laga badiyo islamarkaana Napoli ay ku guuldareysato inay badiso.
* Dhinaca kooxaha ugu hooseysa horyaalka Lecce iyo Genoa ayaa midkood waxa ay heerka labaad kula biiri doonaan Novara iyo Cesena oo iyaga goor hore xaqiijistay inay ka hareen Serie A.
Lecce ayaa la ciyaari doonta Chievo, halka Genoa ay martigelin doonto Palermo. Lecce waa inay badisaa islamarkaana rajeysaa in Genao ay guuldarro ka soo gaarto Palermo si ay u sii joogaan Serie A.
* Tababare Luis Enrique ayaa AS Roma qaban doona maanta kulankiiisii ugu danbeeyay marka ay la ciyaarayaan Cesena, madaama uu ku dhawaaqay bilowgii todobaadkan inuu kooxda ka tagayo.
* AC Milan ayaa maanta macsalaameyn doonta seddex ka mid ah halyeeyadooda iyo Mark van Bommel ka dib markii Alessandro Nesta, Gennaro Gattuso iyo Filippo Inzaghi ayaa dhamaantood ku dhawaaqeen inay kooxda ka tagayaan.